'कसैको सिरानीमुनि लालपुर्जा, मुद्दा विजय गच्छदारलाई ?' : कांग्रेस प्रवक्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'कसैको सिरानीमुनि लालपुर्जा, मुद्दा विजय गच्छदारलाई ?' : कांग्रेस प्रवक्ता
माघ २२, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले बुधबार दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कांग्रेसले आफ्‍ना उपसभापति विजय गच्छदारलाई मुद्दा दायर गरिएको आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै भनेका छन्, 'श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नीतिगत निर्णय । एक पूर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमुनि लालपुर्जा । मुद्दा कसलाई विजय गच्छदारलाई ?'
उनले ट्विट संकेत गरेका पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल नेकपाका महासचिव हुन् । ललिता निवासको दुई कित्ता ८ आना जग्गा उनले छोरा नवीन पौडेलको नाममा किनेका थिए । तर, अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष त्यो जग्गा सरकारको नाममा गर्न तयार रहेको बयान दिएपछि अख्तियारले उनलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नितिगत निर्णय l एक पुर्व मन्त्री कमरेडको सिरानीमुनि लालपुर्जा l मुद्दा कसलाई ? बिजय गच्छदारलाई !
`एनिमल फार्म´ मा जर्ज अर्बेल भन्छन्-
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) February 5, 2020
कांग्रेस उपसभापति गच्छदारविरुद्ध भने तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको हैसियतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उनीसँग अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी गरेको छ । मुद्दा दायर हुनासाथ गच्छदारको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ ।
उनीसहित अन्य दुई तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ ।
शर्माले ट्विटमा प्रसिद्ध लेखक जर्ज अरवेलको चर्चित पुस्तक 'एनिमल फार्म' को भनाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन्- 'अल एनिमल्स आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल देन अदर्स ।'
उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा बिहीबार औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्ने कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।
प्रकाशित : माघ २२, २०७६ २०:४५
यी हुन् ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा लगाएका आरोपीहरु
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बुधबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदारको सांसद पद स्वत निलम्बनमा परेको छ। गच्छदार सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।
अख्तियारले मुद्दामा पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगो मागदाबी गरेको छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्‍चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध ५० करोड,भू-माफिया भनेर किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। अख्तियारको आरोपपत्रमा सुवेदीकी पत्नी माधवी सुवेदीसँग ९१ लाख तथा शोभाकान्त ढकालकी पत्नी उमाकुमारी ढकाल्नीसँग ९१ लाख र छोरी लक्ष्मी ढकालमाथि ३ करोड २८ लाख माग दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै पूर्व भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी माथि ७ करोड ८ लाख, तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि ७ करोड ८ लाख विगो मागदावी गरिएको छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो। ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन्। ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरु हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल तथा पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छैन।
प्रकाशित : माघ २२, २०७६ २०:२९
दक्षिणकालीमा युवती मृत भेटिइन्
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ : के–के हुन सक्छन् बहसका विषय ?
देश न्याय माग्दै छ श्रीमान् !
विश्वप्रकाश शर्मा असार ९, २०७८
नेपाल देश यति बेला एकातिर बाढीपहिरो र महामारीसँग जुध्दै छ, अर्कातिर सम्मानित संवैधानिक इजलासका सामु न्याय माग्न उभिएको छ । अघिल्तिर अँध्यारो सुरुङ अनि पछिल्तिर छ...
दलीय पुनर्गठन : बुद्धिविलास कि आवश्यकता
राजाराम गौतम असार ९, २०७८
सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा सक्रिय नेता सम्भवतः पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै हुन् । फेसबुक/ट्वीटरमार्फत उनी अनेक विमर्श गरिराख्छन् ।
मीता सिंह असार ९, २०७८
देश यति बेला साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण समयमा छ, कोभिडको दोस्रो लहरको सामना गर्दै छ । संक्रमित भएका र मृत्युवरण गरेकाहरूको संख्या सानो छैन । गत वर्षको पहिलो लहरमा...
राजेन्द्रसिंह भण्डारी असार ९, २०७८
विदेशी लगानीमा असफल सुधारका प्रयास
सम्पादकीय असार ९, २०७८
सरकारले अनेकन नीतिगत सुधार गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयास गरेको दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । विदेशी लगानी निरन्तर घट्दो छ । चालु आर्थिक...